Birao fanaovan-gazety - The Foundation valisoa - Fitiavana, firaisana ara-nofo ary ny Internet
Home Birao fanaovan-gazety
"Amin'ireo hetsika rehetra amin'ny Internet, ny pôrnôgrafia dia manana ny fikafika mety hitranga”Hoy Neurozistia holandey. Hatramin'izao, isaky neurolofandalinana gika (mihoatra ny 55) dia manolotra fanohanana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet izay mampifanaraka ny maodely fiankinan-doha, anisan'izany ny fito miteraka firaisana ara-nofo. Raha atao teny hafa, esory ny pôrnôgrafia ary mihena na avelao tanteraka ny soritr'aretina.
Porn-Induced Erectile Dysfunction: Arakaraka ny pôrnôgrafia no mampitombo ny risika amin'ny tsy fitrangan'ny erectile. Manodidina ny 23% ny lehilahy latsaky ny 35 taona izay namaly ny fanadihadiana dia nisy tsy fihanaky ny erectile rehefa nanao firaisana tamin'ny sakaiza iray.
Research avy amin'ny British Board of Film Classification dia nahita izany tany UK Ankizy 1.4 tapitrisa isam-bolana mijery pôrnôgrafia. Efatra ambin'ny folo taona na latsaka ny taona 60 isan-jaton'ny ankizy no nahita sary vetaveta voalohany tamin'ny Internet. Ary 56 isan-jaton'ny zaza 11 ka hatramin'ny 13 taona no te-ho voaro amin'ny fitaovana mihoatra ny 18 taona amin'ny Internet.
Ankasitrahanay ny lanjan'ireo mpanao gazety hampahafantatra amin'ny besinimaro ny loza mety hitranga manodidina ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet indrindra ho an'ny ankizy. Faly izahay manampy amin'ny toerana rehetra azo atao mba hanomezana fikarohana, olona tafatafa ary tantara momba ny tantara.
Ny tena ifantohanay ankehitriny dia ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fifandraisana, fahazoana fanabeazana ary andraikitra ara-dalàna, indrindra ny ankizy sy ny tanora.
Drafitra fampianarana maimaimpoana
Ny Reward Foundation dia namokatra andiany maimaim-poana drafi-pampianarana ho an'ny tanora 11 ka hatramin'ny 18 taona eo amin'ny resaka sary vetaveta sy sary vetaveta amin'ny Internet. Azo alaina amin'ny kinova UK, Iraisam-pirenena ary Amerikanina izy io.
Free Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet
Manana fanavaozana tsy tapaka koa maimaimpoana izahay Torolalana ho an'ny ray aman-dreny hanohanana ny fianaram-pianakaviana sy ny adihevitra momba ny pôrnôgrafia sy ny sexting.
Ny Lehiben'ny Mpanatanteraka, Dr Darryl Mead, ary ny Lehiben'ny fiantrana, Mary Sharpe, Advocate, dia azo dinihina. Raha mpanao gazety ianao dia antsoy izahay amin'ny +44 7717 437 727. Raha manana fanadihadiana tsy maika ianao dia mifandraisa azafady info@rewardfoundation.org.
Kitapo fanaovan-gazety fanaovan-gazety
Fitsipika momba ny fanamarinana taona
Ny fonosana fanaovan-gazety farany an'ny Office Press dia manome lalindalina ny Maninona no ilaina ny lalàna fanamarinana taona momba ny pôrnôgrafia.
valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety ho an'ny Conference of Verification Age, Jona 2020.
Tatitra farany ho an'ny Conference of Verification Age 2020.